သင်က ဘယ်လို PUBG ကစားသမား တစ်ယောက်လဲ? | Codashop Blog MM
Home Games သင်က ဘယ်လို P...
သင်က ဘယ်လို PUBG ကစားသမား တစ်ယောက်လဲ?
ရန်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီး ပစ်ခတ်သံတွေကြားရင် သင်အမြဲပုန်းအောင်းနေလို့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေက အမြဲစတခံရသလား? ဒါမှမဟုတ်သူတို့က Chicken Dinner စားရဖို့ သင့်ကို အားကိုးအားထားပြုရလား? သင်၏ ကစားပုံကဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အပေါ်ကနှစ်ချက်မှာတော့ သင်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဟာပါမှာပါ။
ဒီ ပိုစ့်မှာ အားလုံးကို ခြုံပြီး PUBG ကစားသမား ၄ မျိုး အကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်။ ကစားပုံတွေမတူညီတော့ ခန့်မှန်းလို့မရတာတွေရှိတာကြောင့် PUBG ကစားရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတာပါ။
The Captain (ခေါင်းဆောင်)
သင်ကတော့ ဒီ လေးယောကရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါဘဲ။ Captain America လို မဟုတ်ရင်တောင်မှ အလွန်တော်တဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိပါတယ်။ အ‌ရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ သင်က အဓိကပါ။ Tactics တွေကို အာရုံစိုက်ဖို့က သင့်အလုပ်ပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သင်ကို လူတွေက အရမ်းသတိထားမိမှာမဟုတ်ပင်မဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် မကြည့်တတ်တာက သင့်ရဲ့ အားသာချက်ပါ။
ရယ်ရတာက Captain Type က Game ကို အာရုံစိုက်တာထက် Map ကိုကြည့်ပြီး အာရုံစိုက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ Map ကြည့်ပြီး ဘယ်ကိုသွားသင့် မသွားသင့်ကို ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းနားလည်လို့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တာပါ။ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ တစ်ဖွဲ့ထဲမှာ ဆိုရင်တော့ သူတို့စကားနားထောင်ပြီး ယုံကြည်လိုက်ပါတော့။
သူကတော့ ကစားတာ နည်းနည်းကြမ်းတဲ့ လူမျိုးပါ။ သူက ပစ်ခတ်တာကို ဦစွာလုပ်ပြီး နီးနီး ‌‌ဝေး‌‌ဝေး တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးပါ။ တိုက်တွေထဲအရင်၀င်တာတို့ လမ်းပြပေးတာတို့လုပ်တတ်ပါတယ်။ သူက Kill တွေ အရမ်းမက်ပြီး လောဘကြီးပါတယ်။ သူက တိုက်ခိုက်နေရင် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက်လုပ်ဖို့တို့ Circle ကျဥ်းလာရင် ၀င်လာဖို့တို့ အမြဲ သတိပေးပါ။
Fragger တွေက သတ်ဖို့ကိုဘဲစိတ်ရှိတော့ ဘယ်သေနတ်ရရ သေနတ်မရွေးပါဘူး။ သူတို့ကို ကူညီဖို့ သင်တွေ့တဲ့ Assault Rifle တို့ လိုအပ်မယ့် Scope နဲ့ Compensator တို့လို Attachments တွေကို အရင်ပေးလိုက်ပါ။ သူကာကွယ်ဖို့ Level မြင့်တဲ့ Bulletproof Vest တွေကိုလဲ အရင်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဒါက တိုက်တွေထဲကို ၀င်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ သင်နဲ့ သင့်အသင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အဖွဲ့မှာသူရဲ့ Skill က အတော်ဆုံးဖြစ်ပြီး ရန်သူတွေလဲ ပိုသတ်နိုင်လို့ မိမိတို အသင်းကသူ့ကို ရသလိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ Fragger တွေကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။
Mr. Support တွေက လက်နက်တွေ ကိုင်တွယ်ပေးကမ်းတာမှာ ဆရာကြီးပါ။ သူကို သင်တို့ အသင်းရဲ့ Resident Evil က Merchant တစ်ယောက်လို သဘောထားလိုက်ပါ။ သူတို့က သင်တို့ကို လုံခြုံစေဖို့ (healing items) နဲ့ ပစ်ခတ်ဖို့ (ammo, grenade, etc..) ပစ္စည်းမျိုးစုံကို သယ်ယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Support တစ်ယောက် က Bandage ၁၀ ခုလောက်သယ်ထားရင် မအံသြပါနဲ့။ သူက အားလုံးကို အသက်ရှင်စေချင်လို့ သယ်လာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Survivals Kits တွေကို သယ်ယူလာတဲ့ အပြင် တစ်ခြား အနစ်နာခံမှုတွေကိုလဲ Support တစ်ယောက် အနစ်နာခံထားရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ့အသက်စတေးနေရတာ မဟုတ်ပင်မယ့် သူ့လွယ်အိတ်က နေရာတွေပါဘဲ။ အထူးသဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာ အဖွဲ့၀င်တွေက ကျည်ဆံ နဲ့ ဆေးဝါးတွေ ပိုလိုတယ်လို့ သူယုံကြည်လို့ပါ။ ကဲ သင်ကကော ဒီလို ယုံကြည်ရတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လား?
သင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိချင်ရင် Scout ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ သူက ရန်သူလှုပ်ရှားမှုတို့ သူတို့ ဘယ်မှာပုန်းနေနိုင်လဲတို့ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တာကြောင့်ပါ။ “Hey Cap, let me check this area! I think I heardabump!”. သူက လမ်းရှင်းမရှင်းကို စစ်ဆေးပေးပြီး ဘယ် ဧရိယာမှာ လူရှိမရှိတို့ ဘယ်အဆောက်အဦးထဲမှာပုန်းနေလဲတို့ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူက ချုံထဲမှာပုန်းနေလဲတို့ ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Scout က နေရာကို အရင်သွားကြည့်ရတာမို့ အဖွဲ့၀င်တွေထက် အရင်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အဖွဲ့၀င်တွေကို ရန်သူရှိလားကြည့်ပေးဖို့ပါ။ Scout ကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုဖို့ ရန်သူတွေက သူ့ကို မတွေ့ပါစေနဲ့။ Scout တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ သူက အရင်ဆုံး သေရတာပါဘဲ။
သင်ကကော ဘယ် PUBG Gamer အမျိုးအစားလဲ? သင့်ရဲ့ အထင်အမြင်ကို Comment မှာရေးခဲ့ပါအုန်းနော်။ PUBG Mobile အတွက် UC ကို Codashop မှာ ဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ မြန်ဆန်ပြီး လွယ်ကူချောမွေ့ပြီး Logins နဲ့ Password ၀င်စရာမလိုအပ်ပါ။
Previous articleရုပ်ရှင်တွေမှ အမိုက်စားအသင်းများ : အပိုင်း ၁
Next articleFragment Shop ကနေ နောက်ထပ် MLBB Starlight Skin ရမယ်လို့ သင်လောင်းရဲလဲ?